Recipe Arabia Pita
Indlu yasekhaya Recipes Okunye Iimveliso zehlabathi EMpuma
Ikhekhe lempuma yePete likhekhe elidumileyo elivela eMiddle East. Igama elifanayo liphethe ikhekhe lamaGrisi, kodwa lithe cwaka, ngelixa i-pita yaseArabia ihluthwe njengebhola, ngaphakathi ngaphakathi, xa isika iyenza ipokoth, apho ikulungele ukubeka iintlobo ezahlukeneyo zokuzaliswa. Ngokwesiko, i-pita ifakelwa i-hummus, i-falafel, njl, kunye ne-Yurophu zilungelelaniswa iintlobo zokutya okutya kunye neesaladi, i-pate, inyama kunye nentlanzi. I-teknoloji ye-baking pita iyimfuneko, kwiimeko zethu akunakwenzeka ukuyiphinda, kodwa abafazi baseYurophu baye bafumana indlela yokubhaka i-pita ehovini, evelisa iinqebengwane ngokufana neyendabuko. Into ephambili kule ndlela iqondo lokushisa eliphezulu, kwaye inhlama isetyenzisiwe isidlo. Amagama ambalwa malunga nemvubelo eyomileyo: hlola ngaphambi kokupheka, ungakanani umgubo upakishwa kunye naluphi na umvubelo odibeneyo: kunye nombane okanye umgubo.
Uhlaza, ingqolowa 400 g
Imvubelo, yomile 6 g
Inyathelo 1 Ukulungiselela inhlama, thatha izithako: amanzi, umgubo, imvubelo, ityuwa, iswekile, ioli yeoli.
Inyathelo 2 Isidlo lixutywe kunye nomgubo, ukuba kuyimfuneko yokusebenzisa.
Inyathelo 3 Emanzini afudumeleyo, siyichitha ishukela kunye netyuwa.
Inyathelo 4 Hlanganisa izithako ezomileyo kunye ne-liquid, ufumane intlama elula.
Inyathelo 5 Thetha ioli yeoli yomnquma uze uguqe ade i-oli ifakwe kwinhlama, iguqule ibe yitya epholileyo. Sibeka inhlama kwindawo efudumeleyo yokuphakamisa.
Inyathelo lesi-6 Sinyusa intlama kabini, iyaphuma i-soft and plastic, ayinamathele ezandleni nasemhlabeni wetafile, kodwa usaludinga ukuthungca uthuli itafile kunye nomgubo.
Inyathelo lesi-7 Uhlula intlama ibe yizingxenye ezi-8. Hlela nganye inxalenye kwikheke ngobunzima obungaphezu kwama-7 mm kunye nobubanzi malunga no-15 cm. Beka iibheke zokubhaka kwiphepha lokubhaka elitshisayo. Bhaka kwi-oven, ulungiswe kwangaphambili ukuya ku-250-270 ° C, u-5-7 imizuzu.
Isinyathelo 8 Awudingi ukunqumla amaqebelengwane, ngaphandle koko baya kukhwela. Sibeka iibheke ezilungiselelwe kwiluwula ngokwahlukileyo. I-Pete idliwa efudumele, ibeka izinto ezipokothini. Idida inokuqhwala ngokufaka iphoyile.
Imimangaliso yesidlo saseGeorgia: indlela yokupheka i-chakhokhbili kwi inkukhu
I-Pizza nge ham, i-cheese yebhokhwe kunye neetamatati
Iingxowa zoNyaka omtsha we-2017 I-Rooster zilula kwaye zihlwaya ngenkukhu, abaqhiqiza ngaphandle kwemayonnaise. Salads yonyaka omtsha: zokupheka kunye nesithombe kwimenyu yokuzonwabisa
Silungiselela isidlo sesithsaba seFrench
Ubuhlobo obuphezulu: uTimati waletha u-Alena Shishkov no-Anastasia Reshetova ekukhanyeni, ifoto
Yintoni enokuyenza xa ubuhlobo obusenyongweni bubonakala
Indlela yokufundisa umntwana ukuba athethe ngomfanekiso
Amaswitshisi ashushu kunye noshi neqanda
Isisu sisakhula njani ngexesha lokukhulelwa ngeveki